စွတ်ခုဘတောင် ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
စွတ်ခုဘမြို့ တောင်လက်စွန်းမှာရှိတဲ့ အမြင့် ၈၇၇ မီတာရှိတဲ့ တောင်ဖြစ်တယ်။ နန်းတိုင်းတောင်နဲ့ နရောတိုင်းတောင်ရဲ့ တောင်ထိပ်နှစ်ခုမှ ဖြစ်လာပါတယ်။ စွတ်ခုဘတောင်က အီဘရခိခရိုင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စွမ်းအားရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ဒီတောင်ကို ကိုးကွယ်စရာလို့ သိထားကြပါတယ်။ ကြွယ်ဝတဲ့သဘာဝထဲမှာ တာခုတောင်ရဲ့ နာမည်ကြီးနေရာတွေနဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။
ဆောင်းဦးနောက်ပိုင်း လေထုက သာယာကြည်လင်တဲ့ ရာသီဖြစ်လာရင် ခန်းတိုးမြေပြန့် က ပြောစရာမလိုအောင် မြင်နိုင်ပြီး ဖူဂျီတောင် . အာစမ နဲ့နီကိုး . နစူတောင်တန်းတွေထိအောင် မျှော်ကြည့်နိုင်ပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်လည် မျှော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
( tsukubaဘူတာ ) မှ Tsukubasanလွန်းပျံဘတ်စ်ကား စီးပြီး ( စွတ်စွတ်ဂျိဂအိုခ ) ဆင်း ( ၅၀ မိနစ် )
ဧပြီလလယ်မှ မေလလယ်ထိ ခူရုမဲပန်း၊ ယာမစွတ်စွတ်ဂျိပန...
ပန်းခြံတွင်းမှာ အပင် ၃၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ တရုတ်ဆီးသီ...
ဆာ့တဲမြို့ရဲ့ ဂွန်းဂန်ဒိုးဇွတ်စွတ်မိရဲ့ ဆာကူရာပင...
ဟီတာချီကမ်းနားဥယျာဉ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး ! အီဘာရခိမှာ အကြံပေးချင်တဲ့ ရှုခင်းနေရာ ၇ ခု လက်ရွေးစင်
မြို့နယ်ခရိုင် ဆွဲဆောင်အားအဆင့်မှာ ၄ နှစ်ဆက်တိုက်အောက်ဆုံးဆင့်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ( ဆွဲဆောင်မှု မရှိတဲ့ မြို့နယ်ခရိုင် ) အဖြစ် နာမည်မြင့်တက်လာတဲ့ ကိစ္စတွေများလာတဲ့ အီဘာရခိခရိုင်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အီဘာရခ...
ပထမဦးဆုံးနေထွက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ၁လပိုင်း ၁ရက်နေ့တွင် ထွက်ပေါ်လာသော နေမင်းပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်သည်ကူးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လူအများမှာ ပထမဦးဆုံးနေထွက်ခြင်းကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် အဆင်ပြေသောနေရာသို့ ထွက်သွားကြပ...